Myan Ball – Page 38 – MyanBall is favourite news, entertainment, and lifestyle website.
ဟားဇက်က ဘောလုံးလောက ရဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်လို့ ဘယ်ဂျီယံနည်းပြ ညွန်းဆိုဇာဟာရဲ့ အေးဂျင့်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီးနဲ့ အခြားသော နေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ …….“ရော်နယ်ဒိုက ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။” #အီဘရာဟီမိုဗစ်ဒီအသင္းဟာ အာဆင်နယ်အသင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ယွန်းဘတ်ဂျူဗင်တပ်စ်နောက်ခံလူအတွက် ဘယ်လာရင်ကို အလိုက်ပေးဖွယ်ရှိတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ …..
ဂျူဗင်တပ်စ်နောက်ခံလူအတွက် ဘယ်လာရင်ကို အလိုက်ပေးဖွယ်ရှိတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ …..
လီဗာပူးရဲ့ ပစ်မှတ်ကို ကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ ….
[Unicode] ၁။ မာရီယာနိုကို အသင်းက ထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ့် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး မာရီယာနိုဒီယက်ဇ်ကို လာမယ့် ဆောင်းရာသီမှာ အသင်းက ထွက်ခွာခွင့် ပေးသွားမှာပါ။…
လီဗန်တေးနဲ့ပွဲတွင် ခြေသလုံး ကြွက်သားဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆွာရက်ဇ် ဆေးစစ်မှုခံယူရတော့မယ်
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူးဝစ်ဇ်ဆွာရက်ဇ်ဟာ လီဗန်တေးကို (၃-၁) နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲတွင် ညာဘက်ခြေသလုံးကြွက်သား ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့လို့ ဆေးစစ်မှု ခံယူရပါတော့မယ်။ စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွင် အဆိုပါ တိုက်စစ်ကစားသမားဟာ ပထမပိုင်းမပြီးခင်…
အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်အရည်အသွေးမကောင်းလို့ ဘုန်းမောက်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ မက်ဂွဲရား
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့တုန်းက လက်စတာအသင်းကနေ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၈၀ နဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ မန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဗဟိုနောက်ခံလူ မက်ဂွဲရားက စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ် အစောပိုင်းပွဲတွင် ဘုန်းမောက်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။…
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ လမ်းပတ်က မနေ့က ဝက်ဖို့ဒ် နဲ့ပွဲအပြီးမှာ VAR စနစ်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၁၁) အဖြစ် ချဲလ်ဆီး အသင်းနဲ့…
မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ ဝုဗ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဦးဆောင်ဂိုးရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ဂျာမီနက်စ် ရဲ့နောက်ကျချေပဂိုးကြောင့် သရေတစ်မှတ်သာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆင့် (၅) နေရာမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့…
မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းဟာ မနေ့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့တဲ့ ဆောက်သမ်တန် အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားခဲ့ရပြီး (၂-၁) ဆိုတဲ့ ရလာဒ်နဲ့ အနိုင် (၃) မှတ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆောက်သမ်တန်…
ဒီရာသီ ရလာဒ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မာရေးဆိုက်ဒ် နဲ့ လန်ဒန် ကလပ်နှစ်သင်းရဲ့ အားပြိုင်ပွဲ (အဲဗာတန် စပါး ပွဲကြို အချက်အလက်နှင့် သုံးသပ်ချက်)
ဒီနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၁) နာရီမှာတော့ အဲဗာတန် အသင်းနဲ့ စပါးအသင်းတို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၁) အဖြစ် ရင်ဆိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ရလာဒ်တွေ မကောင်းဖြစ်နေပြီး အမှတ်ပေးဇယားရဲ့…
တစ်ရာသီစလုံး ရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ လီဗာပူးနည်းပြ ဂျာဂင်ကလော့ပ်
လီဗာပူးနည်းပြ ဂျာဂင်ကလော့ပ်ဟာ လက်ရှိ ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာသီတွင် သူ့အသင်းအနေနဲ့ ရှုံးပွဲမရှိပဲ ကစားသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ ရှုံးပွဲကိုတော့ မျှော်လင့်ထားနေတယ်လို့ ဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးကြာနီအသင်းဟာ စနေနေ့က အက်စတန်ဗီလာအသင်းနဲ့ ဗီလာပတ်ခ်တွင်…
မာနေးကို ဒိုင်ဗင်ဘဲကြီး လို့ စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ မန်စီးတီးနည်းပြ ဂါွဒီယိုလာ
မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာဟာ လာမယ့်အပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်က လီဗာပူး နဲ့ပွဲမတိုင်မီ တွင် ပြိုင်ဘက် ကြိုးကြာနီ တိုက်စစ်မှူး မာနေးကို ဒိုင်ဗင်ထိုး တတ်သူလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဂွါဒီယိုလာရဲ့…
စိတ်မပါတဲ့ နောက်တန်းတစ်ယောက်လို့ ဝမ်ဘစ်ဆာကာ ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်ဂန္တဝင်ကစားသမား ဖာဒီနန်
စနေနေ့က ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွင် ဘုန်းမောက်အသင်းရဲ့ အနိုင်ဂိုးကို ယူနိုက်တက်အသင်းက ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရာတွင် ယူနိုက်တက်ညာနောက်ခံလူ ဝမ်ဘစ်ဆာကာ ကို မန်ယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီး ဖာဒီနန်က ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းမောက်တိုက်စစ်မှူး ဂျိုရှုအာကင်း ရဲ့…
Copyright © 2019 Myan Ball